पत्रकारको क्यामेरा तो,डफोड,माथिल्लो दर्जाका प्रहरीले नै देखाए यस्तो हर्क,त,को हुन् ति प्रहरी ?भिडियो) -
पत्रकारको क्यामेरा तो,डफोड,माथिल्लो दर्जाका प्रहरीले नै देखाए यस्तो हर्क,त,को हुन् ति प्रहरी ?भिडियो)
१२ जेठ,काठमाडौं- कोरोनाको माहामारी एकातिर भने सरकारको राजनीतिक अर्को तिर चलिरहेको छ । लाग्छ कहिलेकाही त् निमुखा जनता मार्नको लागि मात्र यो रोग आएको होकी त् ? यसै सन्दर्भमा कामाठमाडौंको गोठाटारको सुकुम्बासी बस्तीको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइ,रल भएको छ । जसमा सुकुम्बासी माथि प्र’हरीले बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । प्र’हरीको समुहसंग क्यामेरा लिएर पुगेका संचारकर्मीको पनि वि,वाद भएको भिडियोमा देखिएको छ । सुकुम्बासी माथि भएको प्र’हरी दमनको भिडियो संकलन गर्न पुगेकाहरुको क्यामेरा प्र’हरीले खोसेको भन्दै वि’वाद भएको हो । प्र’हरीले सुकुम्बासी लाई बल प्रयोग गरेको पनि भिडियोमा देखिन्छ ।
गोठाटारको बाग्मती नदि किनारमा झुपडी बनाएर बसेकाहरुलाई प’शुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अ’तिक्र’मण गरेको भन्दै प्र’हरी टहरा भत्काउन पुगेका थिए । सुरक्षाकर्मीको टोलीको नेतृत्व गर्दै पुगेका प्र’हरी नायव निरिक्षकले नै क्यामेरा तो’डफो’ड गरेको भन्दै प्र’हरीसंग संचारकर्मीसंग वि’वाद भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । बि,बाद पश्चात संचारकर्मीले तपाई खैनी खानुभएको छ, ड्युटीमा खैनी खाने ? भन्दै वि’वाद गरेको पनि सुनिन्छ ।
पत्रकारलाई किन हात हाल्नुभयो? क्यामेरा किन खोस्नुभयो ? तपाईको नाम भन्नुस् तपाई वि’रुद्ध प्र’हरी प्रधानकार्यालयमा उ’जुरी हाल्छौं भन्दै वि’वाद गरेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ । वास्तविक भन्नु पर्दा पुलिस प्रशासनले नै गैरजिम्मेवारी गरेको जस्तो देखिन आएको छ ।
एउटा माथिल्लो दर्जामा रहेका पदाधिकारीले यसरि ह,र्कत देखाउनु पर्ने त् थिएँन होला ? यसरि माथिल्लो तहका कर्मचारीले यस्तो ब्यबहार गर्दा सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको नै बद,नाम हुने पक्कै देखिन्छ । Crime tv nepal ने तयार पारेको हेर्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट :
Previous लगातार ज्वरो आएरै भण्डारीको मृ,त्यु,कोरोना संक्रमण भएको आशं,का
Next सुदूरपश्चिममा झट्का !कोरोनाका कारण पूर्व प्रदेश प्रमुख मल्लको नि,धन